wordpress content layout — MYSTERY ZILLION
wordpress မှာ content layout ကိုခွဲ ချင်ရင် css ရဲ ့ဘယ်နေရာကို ခွဲ ရလဲ သိချင်တယ်ဗျ..
ခုဒီ wordpress မှာ ပိုစ် ့တစ်ခုတင်ရင် တစ်ခု အနေ ပဲ သွားတာ ကျွန်တော်
Home page က ပိုစ့် ခြောက်ဆိုလောက်ကို ..နစ်ခု တစ်တန် းနစ်ခု တစ်န်း အနေနဲ့ သွားချင်တယ်..
အဲ့ဒါ ဘယ်လို၀င်ပြင်ရင်ရနိူင်မလဲ သိချင်ပါတယ်...
နဂို theme ရေးကတည်းက CSS ကိုပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်။ digging into wordpress လိုစာအုပ်မျိုးကိုရှာဖတ်ပါ။ နှစ်ခုတွဲထားမယ်ဆိုရင် div အသေထားလို့မရပါဘူး။ ထားရင် စာတွေက အတိုအရှည်မညီရင် လျှံထွက်နိုင်ပါတယ်။ div အသေမထားရင်လည်း နှစ်ခုကမညီလို့ကြည့်ရတာအဆင်မပြေပါဘူး။ smashing က theme တစ်ချို့ကတော့ မညီတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အဆင်ပြေတာကတော့ အသေထားပြီးတော့ excerpt ကနေပြန်ယူတာပါပဲ။
digging into wordpress ebook . အကိုဆီမှာ ရှ်ိရင် ပေးပါလား ..
ပြီးတော ကျွန်တော် contact us မှာ page လေးတစ်ခု ကို google မြေပုံ နဲ့လုပ်ချင်တယ်..
Google api နဲ့တော ့စမ်းထားတယ်..ဒါပေမယ့်ဒီကောင် က သူတို့website မှာ sing up လုပ်ပြီးရင်
ပို့ပေးမယ်ပြောတယ် ဒါပေမယ်မရသေဘူး ဗျ .. အခြား plug in နဲ့ စမ်းတောလည်း..
Google map short code နဲ့ စမ်းသေးတယ်.. လက်တီကျူတွေ လောင် ဂျီကျူတွေ တောင်းတယ်..
အဲ့ဒီကောင်လေး တစ်ချက်လောက်ဘယ်လိုများ အဆင်ပြေနိူင်မလဲမသိဘူးခင်ဗျာ
click <a href="http://wowebook.net/2011/10/digging-into-wordpress-v3-1-1.html">; here </a> to download
i can't download it. i try to download4days but don't work again and again. please share me other link.
i can't download it. i try to download4days but don't work again and again. please share me other link. :-)